အော်ဘာမီယန်အတွက် ဆတ်ဆတ်ထိမခံ ပြန်ပြောပေးခဲ့တဲ့ အာတီတာ
အော်ဘာမီယန်ကတော့ အာဆင်နယ်ရဲ့ အဓိကတိုက်စစ်မှူးဖြစ်ပြီး အသင်းခေါင်းဆောင်အဖြစ်ပါ တာဝန်ပေးအပ်ခံထားရသူဖြစ်ပြီး အာဆင်နယ်ရဲ့ ဂိုးသွင်းစက်အဖြစ် တင်စားခံရသူဖြစ်ပါတယ်။
အာဆင်နယ်အသင်းနည်းပြအာတီတာက အသင်းတိုက်စစ်မှူးအော်ဘာမီယန်ရဲ့ ဒီရာသီမှာ ခြေစွမ်းမပြနိုင်မှုတွေအပေါ်မှာ ကာကွယ်ပြောဆိုမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အော်ဘာမီယန်ကတော့ အာဆင်နယ်ရဲ့ အဓိကတိုက်စစ်မှူးဖြစ်ပြီး အသင်းခေါင်းဆောင်အဖြစ်ပါ တာဝန်ပေးအပ်ခံထားရသူဖြစ်ပြီး အာဆင်နယ်ရဲ့ ဂိုးသွင်းစက်အဖြစ် တင်စားခံရသူဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၁၈ ဖေဖော်ဝါရီလကစတင်ကာ ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ အော်ဘာမီယန်ထက် ပိုမိုဂိုးသွင်းထားသူအဖြစ် လီဗာပူးလ်တိုက်စစ်မှူးမိုဟာမက်ဆာလာတစ်ဦးတည်းသာရှိပြီး ၆၀ ဂိုးသွင်းယူထားကာ ဂါဘွန်တိုက်စစ်မှူးကတော့ ၅၅ ဂိုးအထိရရှိခဲ့ပြီး ရွှေဖိနပ်ဆုကိုလည်း တစ်ကြိမ်ဆွတ်ခူးထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ကာလတွေမှာ ပွဲချိန် ၁၂၈ မိနစ်ကစားပြီးတိုင်း အော်ဘာမီယန်က တစ်ဂိုးနှုန်းသွင်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း ဒီရာသီမှာတော့ ပွဲချိန် ၄၅၀ ကစားပြီးမှ သွင်းဂိုးတစ်ဂိုးနှုန်းသာရရှိထားပြီး လိဂ်ပွဲငါးပွဲမှာလည်း တစ်ဂိုးသာသွင်းယူထားနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ မန်စီးတီးနဲ့ပွဲအပြီးမှာလည်း အသင်းအရေးနိမ့်ခဲ့ပေမယ့် ဂန်ဒိုဂန်နဲ့ ပြောဆိုရယ်မောနေခဲ့လို့ ဝေဖန်ခံနေရပြီး ဒီအပေါ်မှာ အာတီတာက အခုလိုပဲ တုံ့ပြန်သွားခဲ့ပါတယ်။
"သူ ဂိုးမသွင်းနိုင်တိုင်း မေးခွန်းတွေက အမြဲရှိနေပါတယ်၊ သူ ဘာလို့ နံပါတ် ၉ နေရာမှာမကစားတာလဲ? အဲဒီနေရာမှာသူ့ကို ထားကစားချိန်မှာ သူ့ကို ဘာလို့ဘယ်ခြမ်းမှာထားမကစားတာလဲ? ဆိုပြီးဖြစ်ပြန်ရော၊ သူ့အတွက် မျှော်လင့်ချက်က ပွဲတိုင်းမှာ ဂိုးသွင်းနိုင်ဖို့ပါ၊ ဒါကြောင့်ကစားသမားကောင်းတွေရဲ့ ပုံစံမျိုးနဲ့ သူ ကစားလေ့ရှိပါတယ်၊ ပြီးခဲ့တဲ့ကာလမှာ သူ ဘာတွေလုပ်ခဲ့ပြီးပြီလဲ၊ အနာဂတ်မှာ လူတွေက သူ့ဆီက ဘာတွေမျှော်လင့်နေတာလဲ"
"ဒီအနေအထားတွေကို ကိုင်တွယ်နိုင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်၊ ကျွန်တော်တို့ သူ့ကိုအားပေးထောက်ခံဖို့အတွက် ရှိနေပါတယ်၊ သူ ခက်ခဲနေတဲ့အချိန်တွေမှာ သူ့ကို အားပေးမှုတွေလုပ်ပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်" လို့ အာတီတာက ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ Opta ရဲ့ ဖော်ပြချက်အရ အော်ဘာမီယန်ဟာ ဒီရာသီမှာ မိနစ် ၉၀ ကစားပြီးမှ အခွင့်အရေးကောင်းတစ်ကြိမ်သာ ရရှိထားပြီး ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတွေကထက် သိသိသာသာဂိုးသွင်းအားကျဆင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။